Arts & Humanities » အဝေးက……ဧရာဝတီ	7
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Dec 12, 2015 in Arts & Humanities |7comments
Alinsett @ Maung Thura says: သစ်ပင်တွေ စိမ်းစိမ်းစိုစို မမြင်ရတော့ဘူးနော်….
စိတ်မချမ်းသာစရာ… (ကိုယ်ကအဆိုးမြင်သမားဆိုတော့… တစ်ဝက်လျော့နေတာပဲ…ရွေး တွေးသွားတာ)
“ဘီလူးကြီး”ogre says: မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းနဲ့ မြေလတ် ဒေသဟာ
ခြောက်သွေ့မှုတွေမြန်ဆန်လာနေပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: ဧရာဝတီတလျှောက်… ဆည်တွေ အသည်းအသန်ဆောက်ရလိမ့်မယ်..။
နောက်တော်တော်ကျနေပြီထင်ပါကြောင်းနဲ့.. ရေချိုတွေမဆည်ထားတဲ့.. အကျိုးဆက်ကို.. မကြာခင်နှစ်တွေမယ်.. အပြင်းအထန်ခံစားရလိမ့်မယ်… ပြောလိုကြောင်း….
ဖြစ်နိုင်ရင်.. “ဈာပန ဧရာဝတီ”ဆိုပြီး.. ဓာတ်ပုံစာအုပ်လေး.. လုပ်ရောင်းစေချင်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အသက် ဆက်နိုင်ဦးမှာပါလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အခုရက်ထဲ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဘေးက အဖွားရဲ့ မြို့ငယ်လေး မှာတော့ ၂၄နာရီ မီးရသွားပြီတဲ့။
ဘယ်လောက် ခံမယ်တော့ မသိ။ မီတာခ ဘာလောက်လဲ မသိ။
ဒါပေမဲ့ ထင်းတွေ သက်သာပြီး တရုတ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ အရောင်းသွက်နိုင်ပေါ့။
ပြောသာပြောရ အဲဒီ မြို့ထဲ ၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီးရလဲ အဲဒါ ကို သုံးနိုင်တဲ့ အိမ် နဲ့ မသုံးနိုင်တဲ့ အိမ် ဘယ်လောက်များ လဲ စစ်တမ်းကောက်ခိုင်းဖို့ ကောင်းတယ်။
အဲဒီလို အချက် တွေကို ဒီချုပ်အမတ် တွေ သိသင့်တယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဆွမ်းဦးပုည ရှင်ပေါ်က ရိုက်ချက်လေးးတွေ ထင်ပါ့…
E.မြောက်မြောက် says: ဒီပုံတွေ ကျိရတာ
ရင်ထဲ ပူလောင် ခြောက်သွေ့ လွန်းလှတယ် အမောင်ဘလူးရာ
Mike says: .ပုံတွေမှာစိမ်းစိုမနေတာသတိထားမိတယ်..ကိုဘီလူးပြောသလို
“မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းနဲ့ မြေလတ် ဒေသဟာ